Beautiful Horn of Africa: GARAACA ARDADA AFRIKAANKA DHIGTA ISKOOLADA
GARAACA ARDADA AFRIKAANKA DHIGTA ISKOOLADA
Guumeeystihii markuu soo cago dhigtay Afrika, wuxuu sammeeyay labo qeybood oo waxbarasho ama manaahij: Mid loo qoondeeyay ilmahii Caddaanka ahaa iyo mid loogu talo galay carruurta Madowga ah. Guumeeystayaashii waxay tabo bareen macallimiin Madow ah.
Ardadii Caddaanka ahaa lama garaaci jirin, laakiin kuwii Madowga ahaa waa la tumi jiray loomana ogoleen in ay ku hadlaan afkooda hooyo Garaacii waagaa billowday weli wuu socdaa oo guud ahaan Afrika, garaaca ciyaal iskoolka dhigta waxay iska noqotay wax iska caadi ah oo ilmaha lagu edbinayo.
Dherbaaxo dheg dillaacisa, shabiiq maqaarka ardeyga ku reebta nabarro, bakoora lafaha baduuqda, garruun ardeyga curyaamisa, toontooma feeraha riiqda, haraanti aan kala joogsi laheyn, ayaa ka dhaqan galay qeybo badanoo Afrika kamid ah.
Waxaa intaasi u sii dheer,gaajo baahsan iyo calool madhan, harraad ama oon, kaneeco ku reebta cudurka maleeriyada, nadaafad darro,,iyo gurigii oo aan laheyn nolol maalmeed aanan laysku halleyn karin. Waalidkii dhalay cannugan dhibban, wuxuu aamminsanyahay ilaa hadda, in haddii aan canuga la garaacin, uusan wax baraneyn.
Posted by Adan Makina at 6:35 PM
Labels: Poor Leadership
A LOOK AT SULTAN DEGHOW MUHUMED SAMBUL’S POLITICAL...
WICITAANKA DHAGEYSTAYAASHA: AQOON YAHAN AADAN MAKI...
GUURE XAAJI DUDE: NINKII DHERBAAXAY GUUMEEYSTE ING...
GUUR, HALAQ GALEEN, IYO SADDEX GEERI